विवाद बढाउने योग्य की विवाद मिलाउने ? « Kathmandu Television HD
विवाद बढाउने योग्य की विवाद मिलाउने ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको पदाबधी सकिदै छ । सत्तारुढ नेकपाको भातृसंगठन खेलकुद महासंघको अध्यक्ष त निक्र्यौल भइसकेको छ । तर, यसका अन्य पदाधीकारीको टुंगो लागेको छैन । अहिले नेपाली खेलकुदमा यी दुइ विषय नै धेरै चर्चाको विषय छ । यो चर्चामा अनाहकमा राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षक र पूर्व खेलाडी समेत मुछीएका छन् । यो कुराले यसरी छाएको छकी आफू राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक भएका खेलको स्थिती हरेक दिन विग्रदै जादा पनि ती प्रशिक्षकलाई यसको भन्दा बढी चासो अब बन्ने सदस्य सचिवको बारे छ ।
नेपाली खेलकुदलाई लामो समय देखि नियालेका एक समिक्षक भन्छन्र्, आफ्नो खेलको राष्ट्रिय टोलीका हरेक खेलाडीको प्रदर्शन खस्कदै जादा पनि सत्ता अनुकल रहदाँ खेलाडीको रुपमा पाएको सफलताको भरमा आजीवन राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक हुने चाहनाले राजनिती चलखेल प्रति स्टार खेलाडीको चासो भएको हो । ’
यी भए खेलाडीको चासोको कुरा, मुल कुरा त अबको सम्भावनाको बारे हो । विगतमा नेपाल खेलकुद महासंघको कार्यवाहक अध्यक्ष भइरहेको समयमा केशब विष्ट सदस्य सचिव भएका थिए । अहिले त्यो महासंघ एकजुट भइसकेको छ । यसकारण पूर्व एमाओवादी र पूर्व एमाले दुवै उत्तिकै हकदार हुन् नै । एउटा साचो सत्य के हो भने पूर्व माओवादी संगठन खेलकुदमा सलग्नहरुकै संगठन हो भने एमालेको विचार बोक्ने राजनितीक डम्पीङ साइट मात्र बनेको थियो । महासचिव लामा टेन्डी शेर्पा(बास्केटबल), सचिव धर्म श्रेष्ठ(जुडा) र सचिव (विरेन्द्र श्रेष्ठ( ब्याडमिन्टन) बाहेक सायदै खेलकुद पृष्ठभुमिका थिए । यसकारण पनि एकीकृत पार्टीले खेलकुदको नेतृत्व दिदाँ खेलककर्मी नै उपयुक्त विकल्प हुने र यसकारण पनि पूर्व एमाओवादी संगठनकै हुनु पर्ने जिकिर गर्नेको कमी छैन ।
त्यसो त अहिले प्रचारवाजीकै लागि खेलाडी प्रयोग भएका छन् । सबैभन्दा आश्चर्य त राज्यबाट पाउनु पर्ने कुरा नपाए पनि राज्यको शक्तिको चासो नेपालका ऐतीहासिक खेलाडी जित बहादुर केसीसम्मलाई छोएको छ । एक साप्ताहीक पत्रीकाले केशब विष्ट नै सदस्य सचिव बन्नु पर्ने लबीङ गर्ने क्रममा केही पूर्व स्टारको नामलाई राम्रैसंग प्रयोग गरेको छ । यस भिडमा इतीहासलाई आफ्नै अनुकल ब्याख्या गर्न सक्षम देखि परिणाम दीलाएर लाभ लिन नसकेका जित बहादुर केसीसम्म एक साप्ताहीक पत्रीकामा प्रयोग गरिए । भलै सदस्यसचिव चयन गर्ने काम त्यो साप्ताहीक पत्रीकाको पक्कै नहोस ।
दुइ पटक राष्ट्रिय खेलकुद गरेको प्रचार भइरहदा केही विषय यस सरकारले सोच्ला की नसोच्ला ? यो अहिलेको चासो हो । खेलकुदका जानिफकारहरु भन्छन् ‘विगत चार बर्षमा अफीसीयल अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको नतीजा खस्कदो छ । ’संघ दर्ता गर्ने र त्यसै संघको समान्य कार्यक्रममा लाखौ बजेट अनाहकमा खर्च भएकै छ । ’
यो चार बर्षमा पदीय लोलुप्ताका कारण विवादै विवाद भएका छन् । उसु , एथलेटिक्स र तेक्वान्दोको विवाद यसरी बढ्यो की राज्यको कुनै भुमिका नै छैन । ‘ कार्यकारी प्रमुख एक दिन अघि एउटा कार्यक्रममा पुगेर एउटा बैधताको कुरा गर्ने अर्को दिन दुइ संघ बराबर भएको बताउने । ’
केही संघको विवाद समाधान भएकै हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सीनाको यसमा अहंम भुमिका थियो नै ।धेरै खेलकर्मीको प्रश्न यो पनि होकी, विवाद मिलाउने सफल की पदीय लोलुप्ताका कारण विवाद बढाउने ?